တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ဆိုတာ – Live the Dream
ခွေးချစ်သူ ကြောင်ချစ်သူလေးတွေ ရှိလား ရှိတယ် ဆိုရင် မန်းရှင်း ခေါ်လိုက်ပါအုန်း …….
တိရစ္ဆာန်လေးတွေဆိုတာ အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ လူတွေရဲ့ best friend ပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ best friend အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် လေးတွေ နေမကောင်းတဲ့အခါ ဆေးကုပေးတဲ့ တိရစ္ဆာန် ဆရာဝန်တွေ ရဲ့ အကြောင်း ကို သိချင်မိတာမျိုးများ ရှိခဲ့ဖူးလား ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်က တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ရည်ရွယ်ထားလား? ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ တင်ဆက်ပေးမဲ့ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ လမ်းကြောင်း ပညာအရည်အချင်း အလုပ်အကိုင် နဲ့ ဝင်ငွေ စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဒီတပတ်ရဲ့ Career week အစီအစဉ်မှာ ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်တွေ ဆိုတာ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ဆေးဝါး ကုသပေးခြင်း စတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုသပေးသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့တွေက အများအားဖြင့် ခွေးလေးတွေ၊ ကြောင်လေးတွေကိုပဲ ပြေးမြင်မိကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်း တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍမှာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်၊ ခြံမွေးတိရိစ္ဆာန်၊ အဆိပ်ရှိ တိရိစ္ဆာန်တွေ၊ တိရိစ္ဆာန်ငယ်လေးတွေ၊ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန် စတာတွေ အကုန်လုံး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိရိစ္ဆာန် ရောဂါရှာဖွေသူ၊ တိရိစ္ဆာန်များအပေါ် ဆေးဝါး သက်ရောက်မှုကို လေ့လာသူ၊ ဗိုင်းရပ်စ် ဗက်တီးရီးယား လေ့လာရှာဖွေသူ၊ ခွဲစိတ်သူ၊ Research ပြုလုပ်သူ၊ ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်သူ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ အပြုအမူများ လေ့လာဆန်းစစ်သူ ဆိုပြီး အမျိုးမျိုး ရှိပါသေးတယ်။ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာနဲ့ ရောဂါတွေကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကုသမှု ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ် ပေးခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်တွေကို အထွေထွေ စောင့်ရှောက်ပုံ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆေးဝါးတိုက်ကျွေးဖို့ ညွှန်ကြားချက်နှင့် အကြံများပေးခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ မှတ်တမ်းနဲ့ ရောဂါအခြေအနေတွေကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဌာနဆီ တင်ပြခြင်း စတာတွေဟာ တိရိစ္ဆာန် ဆရာဝန်တွေရဲ့ တာဝန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်မယ့် လမ်းကြောင်း
ကျောင်းရွေးချယ်ဖို့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ခုတည်းတည်ရှိတဲ့ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် (နေပြည်တော်၊ ရေဆင်း) မှာ တက်ရောက်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ တခြား ပြင်ပသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမျိုးတော့ အခုထိ မရှိသေးပါဘူး။ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ တိရိစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့ (DVM) ကို (၆) နှစ် တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဝင်ခွင့်ရရှိဖို့ ဆိုရင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အမှတ် စုစုပေါင်း (၄၂၀) နဲ့အထက် သတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်မှာတော့ အမှတ်ပေါင်း (၄၃၀) နဲ့ အထက် သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့အရာ တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တိရိစ္ဆာန်တွေကို သယ်ရ ရွှေ့ရတာမျိုး၊ ဆေးကုသနေချိန် ထိန်းထားရတာမျိုး၊ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ချိန် အချိန်ကြာမြင့်စွာ မတ်တပ်ရပ်ရတာမျိုး ရှိတာမို့လို့ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာကြံခိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိရိစ္ဆာန်ချစ်တတ်ဖို့ လိုသလို တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဗဟုသုတရှိဖို့နဲ့ လေ့လာလိုစိတ် ရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန် ဖြစ်တဲ့အလျောက် တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေနဲ့ ရောဂါတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရောဂါဗေဒပိုင်းကိုလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ လိုအပ်သလို စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်သူ၊ စေ့စပ်တိကျသူ၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိသူ ဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်နေပြန်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ ရောဂါကို ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ လက္ခဏာတွေကနေတစ်ဆင့် စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ရောဂါလက္ခဏာအကြောင်းတွေကို သေချာအာရုံစူးစိုက် နားထောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန် ပိုင်ရှင်တွေကိုလည်း အကြံပြုဆွေးနွေးတာမျိုး၊ ညွှန်ကြားချက်ပေးတာမျိုးတွေ ပြုလုပ်ရမှာမို့ Communication skill ကောင်းမွန်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အပြင် တိရိစ္ဆာန် မှတ်တမ်းတွေနဲ့ ရောဂါဆိုင်ရာ အကြောင်းတွေကို စာရင်းပြုစုပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဌာနကို တင်ပြရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စာရင်းပြုစုနိုင်စွမ်း ရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဘယ်လောက်ပဲတော်တော် ကိုယ်ကျင့်တရား မကောင်းရင် ဆရာဝန်ကောင်း မဖြစ်နိုင်တာမို့ ကြင်နာပြီး ကိုယ်ကျင့်တရား ဖြောင့်မတ်ကောင်းမွန်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့က နံပါတ်တစ် ဦးစားပေး ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပညာအရည်အချင်း အနေနဲ့ကတော့ အစိုးရတက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်မှ တက်ရောက်နိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဝင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက် လျှောက်ထားလိုသူ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အနေနဲ့ ဇီဝဗေဒ ဘာသာတွဲ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှတ်မှီဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အမှတ် သတ်မှတ်ချက် ကတော့ (၄၃၀) နဲ့အထက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းစရိတ်ကတော့ အစိုးရတက္ကသိုလ် ဖြစ်တဲ့အလျောက် စာအုပ်ဖိုးတွေအပြင် ကြီးကြီးမားမား ကုန်ကျဖို့တော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တက္ကသိုလ်တည်နေရာက နေပြည်တော် ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆောင်နေထိုင်သူတွေ အနေနဲ့ အဆောင်စရိတ်၊ စားစရိတ်၊ သွားလာစရိတ်နဲ့ အထွေထွေစရိတ် စတဲ့ ပြင်ပစရိတ်လေးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်သူတွေအတွက်ကတော့ လူနာ ရတဲ့ အပေါ် မူတည်ပြီး ဝင်ငွေ ရရှိမှာ ဖြစ်သလို ဆေးခန်း မဖွင့်ဘဲ လုပ်ကိုင်သူများ အတွက်လည်း ကိုယ်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်တဲ့ နေရာအလိုက် လစာ ဝင်ငွေ ကတော့ ကွဲ ပြားနိုင်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန် ဆေးကုဆရာဝန်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ပုံမှန်အားဖြင့် လခ ဝင်ငွေ အနည်းဆုံး ၅သိန်း ကစတင်ပြီး လုပ်သက် နဲ့ လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု အပေါ် မူတည်ပြီး သိန်း ၃၀ လောက်ထိ ရနိုင်ပါတယ်။
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် ကို တက်ရောက်ပြီးသွားရင်တော့ တိရစ္ဆာန် ဆေးကုဆရာဝန် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ကို လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီ လက်မှတ်ရှိသူများသာ တရားဝင် ဆေးကု နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် အနေနဲ့ ကတော့ ကိုယ်ပိုင် တိရစ္ဆာန်ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်ပြီးလည်း လုပ်ကိုင်နိုင်သလို အခြား ဆေးရုံကြီးများမှာလည်း ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လို့ ရပါသေးတယယ်။ ဒါ့အပြင် မွေးမြူရေး ကုမ္ပဏီ ကြီးတွေကလည်း နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ကျောင်းပြီးခါစ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် တွေကို အမြဲမပြတ် ခေါ်ယူလေ့ ရှိတတ်သေးတာမို့ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် အဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူတွေ အတွက်လည်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း က မရှားပါး ပါဘူး။
တိရစ္ဆာန် ဆေးကု ဆရာဝန်တွေဟာလည်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ပဲ ဆေးကုသ ပေးတာ မဟုတ်ဘဲ အခြား ခြံမွေး တိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်း ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက် ရတာ ဖြစ်သလို ရောဂါရှာဖွေမှုတွေ နဲ့ အပြင် လူတွေကို မကူးစက်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးရတဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန် လေးတွေ ဆိုတာဟာ လူတွေထက် တန်ဖိုး မလျောတဲ့ သက်ရှိသတ္တဝါ လေးတွေ ပါပဲ။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ ရှိနေခြင်းဟာ လူသားတွေ အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အဖော်မွန်ကောင်း ဖြစ်သလို သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရေးကြီးတဲ့ ဂေဟစနစ် မျှတ မှု ကိုလည်း အထောက်အကူ ပြုတာ ဖြစ်တာမို့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ မျိုးတုံး မသွားဖို့ ရန်အတွက်ကလည်း အထူး အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ အနာဂတ် လှပဖို့ရန်အတွက် တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် တွေကိုလည်း လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လိုအပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် – ဒေါက်တာကျော်လွင်